Hargeysa: Kooxda MSG Oo Ku Guuleysatay Tartankii Bisha Ramadaan Ee Garoonka Badhtamaha Stadium
You are here: Home somal Hargeysa: Kooxda MSG Oo Ku Guuleysatay Tartankii Bisha Ramadaan Ee Garoonka Badhtamaha Stadium
Kooxda ku ciyaaraysay magaca MSG ayaa maalintii shalay ku guuleysatay tartankii bisha Ramadaan ee ka socday garoonka doogga mac-malka ah ee Badhtamaha Stadium, kadib markii ay 4-2 kaga guuleysteen kooxda dhigooda ee iyaduna ku ciyaaraysay Tayo.
Tartankan oo uu maal-geliyay musharaxa u taagan doorashadda Barlamaanka ee la filayo inay qabsoonto sannadka 2017-ka Mr. Maxamed Amiin Cabdi Dixood,
waxaana gunnaanadkii tartankan ka soo qeyb-galay guddoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta Somaliland Mr. Cabdilaahi Kheyre Cawaale (Gacal), Guddoomiya garsoorka xidhiidhka Mr. Khadar Jiilaal Jaamac, marti-sharaf iyo taageerayaal baddan. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Duulista iyo Hawada Mr. Axmed Cali oo isagu qaban-qaabada iyo qabsoomida tartankan gacan ka gaystay, waxaana uu ka war-bixiyey tartankan iyo kooxaha ka qeyb-galay iyo sidoo kale in bisha Ramadaan dadka soomani ay u soo daawasho tagi jireen isagoo sidoo kale uga mahad-celiyay Musharax Maxamed Amiin Cabdi Dixood.
Guddoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta Somaliland Mr. Cabdilaahi Kheyre Cawaale (Gacal), ayaa aad ugu mahad-celiyay dhallinyarta soo qaban-qaabisay tartankan iyo weliba Musharax Maxamed Amiin Cabdi Dixood, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa “Maanta waxaan ku faraxsanahay inaynu soo gunnaanadno tartankii bisha Ramadaan ee ka socday garoonkan, runtii ka xidhiidh ahaan waanu soo dhaweynaynaa in garoomada ceynkan ah ee caasimadda ku yaala lagu qabto tartamo, maadaama garoomadani ay kaga duwan yihiin xagga nabad-galyada iyo weliba ciyaartoyda oo aanay soo gaadhayn dhaawacyada dirrida iyo camuuda. Musharax Maxamed Amiin Cabdi Dixood aad iyo aad ayaan ugu mahad-naqaynaa, iyo dhallinyartii sida fiican ee nabad-galyada ah u soo daadihinaysay intii uu socday” ayuu ku soo koobay hadalkiisi Guddoomiye Gacal.
Ugu dambeyntii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Guddoomiyaha garsoorka kubadda cagta Mr. Khadar Jiilaal Jaamac, waxaana uu xusay in ka xidhiidh ahaan ay ku faraxsan yihiin in guud ahaan tartamadii bisha Ramadaan ay ku soo gaba-gaboobeen si nadiif ah oo nabad-galyo ah. Ugu dambeyntii, kabtanka kooxda MSG ciyaartoy Cabdikariim Guji ayaa la guddoonsiiyay koobkii tartanka, halka sidoo kale iyagana abaal-marrino lagu taxay kooxdii ugu akhlaaqda wanaagsaneyd, ciyaartoygii tartanka iyo sidoo kale laacibkii ugu goolasha baddnaa intii uu tartanku socday.